…त्यसपछि उनले ‘मृ’त्यु रोजिन र संसारबाट सधैका लागि बिदा भइन ! – " सुलभ खबर "
…त्यसपछि उनले ‘मृ’त्यु रोजिन र संसारबाट सधैका लागि बिदा भइन !
मानव जीवन सुखदुःखको सम्मिश्रण हो। उतारचढाव जति नै भए पनि जोकोही व्यक्ति म’र्नदेखि निकै डराउँछ। जीवनबाट निराश भएका केही व्यक्ति भने देहत्यागरोज्छन्। देहत्यागकानुनी वा गैरकानुनी भन्नेचाहिँ देशको कानुनअनुसार छ।कतिपय देशमा अहिले ‘मृ”त्यु’वरणले वैधानिकता पाइसकेको छ। त्यस्तै देश हो नेदरल्यान्ड्स र नेदरल्यान्ड्सकी नोआ पार्टहोवेनको काण्ड। नेदरल्यान्ड्सको राजधानी
एमस्टरड्यामकी १७ वर्षीया नोआ पार्टहोवेनले घरमै डाक्टर बोलाएर ”मृ’त्यु’व’रण गरेकी छन्।नोआ सानो उमेरमै ‘यौ’नशो’ष’ण’को सिकार भएकी थिइन्। पहिलोपटक ११ वर्षमा ब’ला’त्का’रको सिकार भएकी नोआ पुनः १४ वर्षको उमेरमा ‘यौ’नशो’षण’मा परिन्। जसका कारण उनी डि’प्रे’स’न’बाट ग्रसित भइन्। केही समयदेखि उनलाई ‘अ’नोरो’क्सि’या’ (खाना र भोक नलाग्ने) रोगले पनि सताएको
थियो।उनले आफ्नो जीवनको भोगाइमा आधारित ‘वि’निङ ‘अर ल’र्निङ’ नामक किताब लेखेकी छन्। पुस्तकमा उनले यौ’न’शो’षण’मा परेकाहरू कसरी बाँच्न सक्छन् भन्ने उल्लेख छ।तर, उनका लागि भने ती पीडामुक्त हुन सहज भएन। जसका कारण उनले ”मृ’त्यु’व’रण गरिन्। गत हप्ता उनले आफ्नो इन्स्टाग्राम अकाउन्टमा १० दिनभित्र ‘मृ”त्यु’वरण गर्न लागेको पोस्ट गरेकी थिइन्। वर्षौंदेखि सामना गर्दै आएको उक्त
घ’ट’ना’बाट बाहिर निस्कन नसकेपछि उनले ‘मृ’त्यु’वर’ण गर्ने निर्णय गरेकी हुन्।नोआको ‘मृ”त्यु’ सामान्य तवरले नै भएको नेदरल्यान्ड्सका मिडियाले जनाएका छन्। नेदरल्यान्डमा स्व’मृ”त्यु’वरणको कानुनी व्यवस्था छ। ‘टर्मिनेसन अफ लाइफ अन रिक्वेस्ट एन्ड असिस्टेट ‘सु’सा’इट एक्ट अफ २००१’ का अनुसार डाक्टरको अनुमतिमा बिरामी आफ्नो पी’डा सहन नसक्ने भएमा उसले ‘मृ”त्यु”लाई अंगाल्न पाउँछ।
ट्रम्पले बाइडेनलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने : चुनावी परिणामविरुद्धको कानुनी लडाइँ भने कायमै राख्ने
काठमाण्डाै – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपतिमा निर्वाचित जो बाइडेनलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुहुने भएको छ
बेलायती प्रधानमन्त्रीद्वारा कोरोना भाइरसको सामूहिक परीक्षणको घोषणा
काठमाण्डाै – बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले कोरोना भाइरसको सामूहिक परीक्षण गर्ने योजना घोषणा गर्नुभएको छ
ट्रम्पको नतिजा उल्टाउने प्रयास असफल
काठमाडौं । हुलाक मार्फत खसालिएका दशौँ लाख मतलाई अवैध गर्न माग गरि ट्रम्पको टिमले पेन्सिलभेनियामा
काठमाण्डाै – अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा कर्फ्यु लगाइएको छ । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि गए रातिदेखि
काठमाण्डौ – कतार सरकारले अब नयाँ श्रमिक पनि लिने भएको छ । नोभेम्बर १५ मा
राष्ट्रपतिको आधिकारिक ट्वीटर अकाउन्ट बाइडेनले जनवरीमा पाउने
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनावमा जित हात पारेका जो बाइडेनले आगामी जनवरी २० मा मात्रै
व्रतालुहरुले व्रत सकिएपछि खान हुने र खान नहुने कुराहरु
विवाह गर्नुहोस नत्र स्वास्थ्यमा पर्छ यस्तो असर..
एक तोला सुनमा बलात्कार घटनामा मिलापत्र, नदिएपछि बाहिरियो